Kidnapping tetsy Behoririka : navotsotr’ireo jiolahy i Nishit Chandarana | NewsMada
Kidnapping tetsy Behoririka : navotsotr’ireo jiolahy i Nishit Chandarana
Par Taratra sur 17/06/2017
Nandoa ny vola tambiny ve ny fianakaviana? Sa natahotra ireo jiolahy mpaka an-keriny? Sa antony hafa mihitsy no nakan’izy ireo an’ilay karàna tompon’ny Hôtel Grand Mellis? Mbola manjavozavo ny raharaha. Ny hany fantatra, navotsotr’ireo mpaka an-keriny i Nishit Chandarana…
Tsy mbola nahazoam-baovao hatreto ny fepetra ka nahatonga ireo mpaka an-keriny namotsotra an’i Nishit Chandarana, ilay teratany Karana nisy naka an-keriny teny akaikin’ny trano fonenany eny Behoririka ity ny herinandro teo. Notazonin’ireo jiolahy nandritra ny 10 andro mahery teo, araka izany, ity karana tompon’ny hotely Grand Mellis eo Analakely ity. Tsy fantatra ihany koa hatreto izay fifanarahana nisy teo amin’ireo jiolahy sy ny fianakavian’ilay Karana. Nanome an-tsokosoko vola notadiavin’ireo jiolahy ny fianakaviany? Isan’ny mampanano sarotra ny mpitandro filaminana rahateo ny tsy fahasahian’ny fianakaviana mametraka fitoriana eny anivon’ny polisim-pirenena rehefa misy trangana fakana an-keriny toy izao. Ny polisy rahateo koa aza tsy mahalala sy/na tsy mahazo vaovao marina momba izany raha tsy efa votsotra ilay karana alaina an-keriny.
Nilaza kosa ny polisy fa mitohy hatrany ny fanadihadiana ny raharaha fakana an-keriny na efa navotsotr’ireo olon-dratsy aza ireo teratany karana nisy naka an-keriny.
Nanao antso avo ny masoivohon’i Inde…
Fa anisan’ny naneho hevitra momba izay fakana an-keriny izay ny masovoihon’i Inde, Subir Dutta miasa sy monina eto Madagasikara. “Efa imbetsaka izahay ny namerimberina fa tokony hatsahatra amin’izay ny fakana an-keriny ary manao antso avo amin’ny manam-pahefana mba hijery akaiky sy handray andraikitra manoloana izany. Efa nisy ny fihaonana teo amin’ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena sy ny Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena ary ny minisitry ny Filaminam-bahoaka momba ity raharaha ity mba tsy hiverenan’ny fakana an-keriny intsony”. Nohamafisin’ny masoivohon’i Inde fa mitohy hatrany kosa ny fifandraisan’i Madagasikara sy i Inde ary tsy hisy fiantraikany eo amin’ny lafiny fifandraisana eo amin’ny tany roa tonta izany. Vao tsy ela koa ny praiminisitra niresaka momba ny fakana an-keriny ka antenaina fa hisy vahaolana matotra momba izany, araka ny nambarany.
Tsiahivina fa jiolahy nandeha moto nirongo basy Kalachnikov no naka an-keriny azy teo akaikin’ny trano fonenany eny Behoririka, ny alarobia 7 jona 2017 tamin’ny 8 ora maraina. Efa nandrasan’ireo olon-dratsy teo amin’ny arabe izy tamin’io fotoana io raha iny nivoaka ny trano fonenany hamonjy fiara iny. Tao anatin’ny minitra vitsy no nanatanterahan’ireo jiolahy ny fakana an-keriny ka nentin’ireo tamin’ny moto. Voarain’ny camera de surveillance teo amin’ny trano fonenany ny fomba nanatanterahan’ireo jiolahy ny fakana an-keriny an’i Chandarana. Hita tao amin’ny sary fa nanao satroka kasikety ireo olon-dratsy ka nizotra ny lalana midina mankany amin’ny Ranomaimbo Behoririka taorian’izay. Marihina fa 24 ora taorian’ny namotsoran’ny jiolahy an’i Yanish Ismaël, ilay zanaka Karana nisy naka an-keriny teny Ilafy, nitranga indray koa ny fakana an-keriny an’i Chandarana.
Lasibatra hatrany ny teratany karana tato ho ato. Tsy eto an-dRenivohitra ihany fa hatrany Mahajanga sy Toamasina ity fanaovana herisetra amin’ny Karana ity.
Misy ny firaisana tsikombakomba amin’ny mpitandro filaminana satria miaraka amin’ny fitaovam-piadiana mahery vaika hatrany ireo mpaka an-keriny? Tsy maintsy olona nahavita fiofanana manokana momba ny fisamborana olona koa no mahavita maka an-keriny ireny Karana ireny fa tsy vitan’ny jiolahy tsotra sady tsy mitondra fitaovam-piadiana. Andrasana ny tohin’ny fanadihadiana momba ny raharaha fakana an-keriny.